OpenSUSE 12.2 Rinokosha 2 rinowanikwa | Kubva kuLinux
Vanoda mhashu vane mhanza, sezvazvinowanikwa vhuraSUSE 12.2 Rinokosha 2 maererano saiti yenhau yegreen distro.
Imwe yezvinhu zvitsva zvekuburitswa izvi ndeyekuti inosanganisira Grub2 y Plymouth zvekuti maflickers haacharatidzwe pakutangisa neyekupedzisira. Zvakare zvinosanganisirwa GCC 4.7, basa riri kuenderera mberi rekuvandudza rutsigiro rwe ruoko, uye wedzera RazorQT pamwe chete nekushandisa kwese.
Unogona kurodha pasi vhuraSUSE 12.2 Rinokosha 2 kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » OpenSUSE 12.2 Milestone 2 inowanikwa
Zvinoseka, iyo distro yakandipfura kuArch yaive iyi; mushanduro yapfuura
Imwe nzira yakatenderedza, ndinofara nekuparadzirwa uku uye ndiri kumirira kuti vhezheni itsva ibude.
Pasina nguva refu ndakaedza Debian (akatsiga), Debian (kuyedza); kwekanguva ndakashandisa Fedora (iyo yakagara kwenguva yakareba) asi haina kunyatsondikurudzira; Pakati peUbuntu ndipo paive pekutizira. Uye pakupedzisira ndakaramba ndakavhuraSUSE, izvo zvinondipa kunzwa kuti zvichandigarisa kwenguva yakareba (kana ndikatsungirira "dystronitis")
Pindura kune rogerbassons
kuvhuraSUSE kuve nani 🙂
Zvagara zvichiita sekunge kwandiri zvakakomba uye neicho chinofambira nhanho yakasimba. Asi handizive kuti chii…. asi ini handizvifarire ... Pamwe ndizvo zvakashata zviitiko zvekutanga kwangu neLinux. Dai zvaitenderera zvainge zvakakwana.
Saka kare kare zvakakwana:
Ini ndanga ndisingazive nezve uyu musiyano: O
Iye zvino ndoda kuyedza 😀
Ini ndichamirira iyo yekupedzisira vhezheni kuti iitore, ini handifarire kwazvo betas ????
MuTumbleweed hauzove neiyo nyowani vhezheni kusvikira yazvino vhezheni, repo iyi inosanganisira chete software inoonekwa seyakagadzikana, neTumbleweed iwe unenge uine openuse 12.1 yekutaura zvishoma asi yakagadziridzwa -> kde, tsanga ……
Zvakanaka, semunhu mutsva newbie anobva ku «Güin2» ini ndatora pasi akati wandei vhezheni kuti ndiedze, iwo mhenyu haana kundikurudzira zvakanyanya uye ndakafunga kuyedza yega yega nekuvaisa muchikamu uye ndichivashandira, panguva ino ndinoiridza zvakare neSuse KDE, ndanga ndatoiisa iyo 2 Dzimwe nguva asi zvairatidzika kwandiri kunge zvakabatwa neanotanga asi ndatova neruzivo rwevamwe vari pasi peichi chiitiko uye ndichagara nayo kwechinguva kana ndikasaora moyo uye chinja Kubuntu iyo yandinoda chaizvo. Mubvunzo chete wandinayo ndewekuti kana vhezheni yekupedzisira yeiyi Beta yabuda, ichagadzirisa here kana kuti unofanirwa kuisa zero?
Mhoroi, pese panoburitswa danho idzva unomhanya zypper dup kubva kunyaradzo uye vhezheni yacho inovandudzwa.
Ramba uchifunga kuti zviitiko zvakakosha ndezve beta shanduro saka mashandisiro avo anokurudzirwa kuyedza uye kuburitsa zvikanganiso asi kwete zvekushandisa zvakajairika. Nezve iyo zvirinani yekuisa vhezheni 12.1 uyezve iwe uchagadzirisa kana 12.2 yabuda.
Ndiri kufara kuziva kuti iyi nyowani vhezheni yave kuwanikwa, ndaona kuti vakomana veOpensuse havana kumira kuita basa rakanaka.
Iniwo ndinokukoka kuti ushanyire.